Wax, labozia misy fofona ary lohahevitra fararano vaovao avy amin'ny Hay Day | Androidsis
Miverina miaraka amin'ny fanavaozana vaovao ny Hay Day izahay, izay mitondra amin'ity indray mitoraka ity milina vaovao hamoronana labozia sy vokatra vaovao toy ny savoka, izay azo noforonina tamin'ilay mpitrandraka tantely nampidirina tamin'ny fanavaozana teo aloha izay nitondra biby vaovao toy ny tantely. Amin'ny savoka dia afaka mamorona labozia manitra hatramin'ny 3 ianao.
Amin'ity fahazoana vaovao ity dia mihamatanjaka ny orinasa sy ny orinasa haavo famokarana hafa hahafahana mameno ny seho fampisehoana amin'ireo magazay samihafa mandrafitra ny tanànantsika. Ho an'ny ambiny, kely kokoa ny hanampy an'ity fanavaozana vaovao ity, na dia ny lohahevitra fararano aza izay azo ankafizina manomboka anio amin'ny fotoana fanavaozana ny lalao amin'ny Play Store dia mendrika homarihina ihany koa.
1 Wazia sy labozia misy fofona
2 Ny lisitry ny vaovao iray manontolo
3 Ny tantely
Wazia sy labozia misy fofona
Rehefa tonga tany amin'ny toeram-piompiana ireo tantely, dia noheverinay fa hisy vokatra vaovao ho tonga amin'ny fanavaozana vaovao, izany indrindra no ananantsika ankehitriny miaraka amin'ny mety mamorona savoka avy amin'ny mpitrandraka tantely. Azonao atao ny manomboka mametraka azy ireo ho "miasa" fa afaka mamokatra ireo labozia misy fofona.
Hatramin'ny 3 no labozia manitra azontsika havoaka ary ho an'io dia misy milina vaovao miseho mila ilaintsika. Iray amin'ireo labozia misy fofona 3 fofona frezy, fofona voasarimakirana iray hafa ary voaroy hafa.
Ny lisitry ny vaovao iray manontolo
Na dia tsy iray amin'ireo fanavaozana misy vaovao manan-danja maro aza ity indray mitoraka ity, dia i Supercell hatrany mazàna dia mitondra fanampin-javatra kely araka ny hitanao etsy ambany.
Ny lohahevitra fararano dia efa tonga tao amin'ny Hay Day
Ny fizarana FAQ amin'izao fotoana izao dia nosoloina rafitra vaovao sy rafitra fanampiana miaraka amina base data tena tsara
Fanatsarana lehibe ny gazety: izao dia mahatadidy ny pejy farany notsidihina
Ny trano fitobiana sy ny silo koa izao dia mampiseho izay vokatra tsy mitahiry
Fanitsiana isan-karazany amin'ny tahan'ny fakana famaky
Fampandrenesana vaovao rehefa vonona ny hangonina ireo takelaka tantely
Fanamboarana bibikely lehibe maromaro ankoatry ny zavatra hafa, tokony hatsaraina ny fotoana fandefasana rehefa mitsidika mpilalao hafa
Fiomanana amin'ny Halloween, anisan'izany ny haingon-trano voafetra ara-potoana sy ny tsy ampoizina maro hafa haseho rehefa manakaiky ny Halloween
Andininy iray momba ny Halloween dia izany hisy ny lohahevitra ho azy manokana, faharetana kely.
La fanavaozana teo aloha sy lehibe nitondra ny tantely niaraka taminy ary kirihitra sasany izay anangonany vovobony ilaina ny mamadika azy ao anaty takelakao ho lasa nectar, ary avy eo ento any amin'ilay mpitrandraka tantely vaovao.
Anisan'ireo vokatra azo amboarina amin'ny tantely no ahitantsika ny sakamalao, toast na pie tantely tantely. Ary toa izao no fiandohana, satria ankehitriny miaraka amin'ny savoka vaovao azo havaozina, miandry ny vokatra vaovao hiseho amin'ny fanavaozana manaraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Araraoty tsara ny tantely any amin'ny toeram-pambolenao miaraka amin'ny fanavaozana ny Hay Day vaovao
Ahoana ny fametrahana ny fanarenana nohavaozina ao amin'ny Bq Aquaris 5,7 "(Tena mora)
Ahoana ny fomba famongorana ny Bq Aquaris 5,7 "afaka 10 segondra